के तपाइले नागरिक एप डाउ’ नलोड गर्नभयो ? सरकारले सार्वजनिक गरेको नागरिक एपबाट के-के सेवा लिन सकिन्छ ? – Ap Nepal
के तपाइले नागरिक एप डाउ’ नलोड गर्नभयो ? सरकारले सार्वजनिक गरेको नागरिक एपबाट के-के सेवा लिन सकिन्छ ?
सरकारले सरकारी सेवा प्रबाहका लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरको नागरिक मोवाइल मोवाइल एपबाट के-के सेवा लिन सकिन्छ भनेर नागरिक स्तरमा बहस सुरु भएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरे पछि कसरी चलाउने के–के सेवा कसरी लिने भन्ने बारेमा नागरिकमा जिज्ञासा थपिएको हो ।
शुक्रबारदेखि एन्ड्रोइड मोवाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताले एप्स स्टोरबाट नागरिक एप डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । आफ्नै नाममा दर्ता भएको नेपाल टेलिकमको र एनसेलको सिमकार्डबाट मात्र अहिले यो एप प्रयोग गरेर सेवा लिन सकिनेछ । यो एपको प्रयोगबाट समयको बचत, झन्झट हट्ने, खर्च जोगिने, पारदर्शिता बढ्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
नागरिक एप्समा नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचय पत्र नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर राहदानी नम्बर, कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कोष नम्बर राखेपछि त्यसको पुर्ण विवरण एपले देखाउनेछ । नागरिक एपले आफैँ आवश्यक विवरण लिने र पुष्टी गर्ने काम गर्छ । नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जस्ता कागजात साथमा बोकेर हिड्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो एप प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो रहेको उनले बताए ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार एपले मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ भन्ने कुरा पनि स्वचालित रुपमा पत्ता लगाउन सक्छ । नागरिकता नम्बरबाट एपले सम्बन्धित निकायको प्रणालीमा पहुँच बनाउँछ । यो एप प्रयोगकर्ताले अब कुनै पनि कार्यालयमा सेवा लिन जादाँ कुनै पनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाइरहनुपर्दैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रबाट पाउने सबै सूचना यसै नागरिक एपबाट पाउन सकिन्छ । सरकारी निकायबाट नागरिकले पाउने ६४ वटा सेवा मध्ये ४० वटा सेवा एउटै नागरिक एपबाट लिन सकिने महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
एपमा कुनै विवरण भरिरहनु पनि पर्दैन । एक क्लिकमै सम्बन्धित सरकारी सेवाका लागि आफै आवेदन भरिन्छ । यस एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्धसरकारी सेवा समेटिनेछन् । यसले सरकार सञ्चालनमा सहजता मात्र नभइ, सुशासन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा पनि महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको नागरिक एपको सुरुवात गर्न ३ वर्ष लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । यसको तयारी पुरा भए पछि आजबाट परिक्षण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र कार्यक्रमका रुपमा लिएको उनले बताए । नागरिक एपलाई अझै व्यवस्थित बनाएर लिने पनि मन्त्री गुरुङले प्रतिवद्वता जनाए । यसको प्रयोग र सुरक्षालाई ध्यान दिएर छिटो छरितो बनाउका लागि लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।
मोवाइलबाटै हात हातमा सेवा दिनका लागि र आफ्ना सबै सामग्री मोवाइलमा नै सुरक्षित राख्नका लागि नागरिक एप प्रभावकारी हुने र सुरक्षित हुने पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । नागरिकलाई सरकारी सेवा २४ घण्टा र विदाको दिन पनि दिने र सेवालाई सरल बनाउने सरकारको योजना पुरा भएको मन्त्री गुरुङको दावी छ ।
Prevजानिराखौ, कालो नुन अथवा बिरे नुनले खाना स्वादिष्ट बनाउनको साथै अन्य फाइ,दाहरु, यस्ता छन्
Next६ बर्ष पहिले मʼरेको मान्छेको चिहान राती १२ बजे खनेर निकाʼल्ने झाक्री, मोरङ्गमा बिश्वास नलाग्ने यस्तो घटना (भिडियो सहित)
मेरीबास्सैका बान्द्रेको करोडौं पर्ने टर्की फाम देखी बट्टाई , फर्म छिर्दा देखियो यस्तो दृष्य (भिडियो सहित)
मोदीले सानै उमेरमा विवाह गरेका थिए तर किन लुकाउँछन् आफ्नी श्रीमती ? सबैलाई चकित पार्ने यस्तो छ कारण ! (भिडियो सहित)